Ngwukpo Nukukpo (475-83-2) hplc =98% | AASraw Fat Loss ntụ ntụ
Nuciferine ntụ ntụ
/ ngwaahịa / Osisi wepụ / Nuciferine ntụ ntụ
Rating: SKU: 475-83-2. Category: Osisi wepụ
AASraw nwere njikọ na mmepụta site na gram ka usoro nchịkọta nke ntụ ntụ Nuciferine (475-83-2), n'okpuru ụkpụrụ CGMP na usoro nchịkwa mma.
Nuciferine ntụ ntụ bụ alkaloid dị n'ime osisi Nymphaea caerulea na Nelumbo nucifera. Ọ nwere profaịlụ nke ihe ndị metụtara dopamin receptor blockade.It induces sedation, hypothermia, ptosis, na (na elu doses) catalepsy; ọ na-egbochi ọrụ mberede na-agaghị aga n'ihu, nkwụsị ịgwọ ọrịa, ọgwụ mgbu amphetamine na stereotypy. Ngwukpo ntụ nke nchịciferine pụkwara ịmịpụta analgesia morphine. Ngwakọta ọgwụ ọjọọ n'ime ụmụ oke bụ 289 mg / kg. Ejikọtara ya na apomorphine.
Nuciferine ntụ ntụ video
Ngwakpo Nukukpo Nzuzu bụ isi ihe
aha: Nuciferine ntụ ntụ
Usoro Molecular: C19H21NO2
Molekụla arọ: 295.38
Ngwakọta Nukukpo Nzuzo na-atụgharị oge nkwụsị
Raw Nuciferine ntụ ntụ Usage
1.Nuciferine raw powder bụ isi arụ ọrụ aporphine alkaloid si epupụta nke N. nucifera Gaertn nke nwere anti-hyperlipidemia, mgbochi hypotensive, anti-arrhythmic, na insulin secretagogue eme.
2. Ngwukpo Nukirine bụ ezigbo onye na-aṅụ ọgwụ ọjọọ maka ọgwụgwọ ọrịa ndị metụtara oké ibu, site na ịmalite imeju Hysị na dyslipidemia nakwa na imeju na nhụjuanya.
3. Nuciferine raw ntụ ntụ nwere ike ịbụ maka mgbochi na ọgwụgwọ hyperuricemia na akụrụ mbufụt.
4. Ngwukota ntụ nke nchịciferine nwere mmetụta vasorelaxant site na usoro usoro endothelium na-adabere ma na-adabere na ya, na-atụ aro na ntụpọ Nuciferine nwere ike ịmalite ọgwụgwọ ọrịa na-arịa ọrịa gbasiri ike na-ejikọta na vasoconstriction.
5. Ntuciferine raw powder, nke e si na Nelumbo nucifera puta, nwere ike kpalite ihe omimi nke insulin na obere agwaetiti site na imechi ogwu potassium-adenosine triphosphate, na-akowaputa ihe ndi na-aru oria na Nelumbo nucifera.
6. Nuciferine ntụ ntụ (CAS 475-83-2) na-egbochi mmetụta nke tumor na-akwalite mmetụta nke nicotine metụtara akara Wnt / β-catenin na ọrịa cancer na-abụghị obere cell, ọ na-egosi ihe ọhụụ nwere ike iji gbochie mgbochi na ọgwụgwọ NSCLC.
Ịdọ aka ná ntị na ntụ ọka Nuciferine
Inye nchekwa dị ka ekwuru na vidiyo ngwaahịa ahụ ma na-ehichapụ ya, a ga-echekwa ngwaahịa a ruo ọnwa 24 (2-8C).
N'ebe o kwere mee, ịkwesịrị ịkwadebe ma jiri ngwọta n'otu ụbọchị ahụ. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ịchọrọ ịmepụta ngwongwo ngwaahịa n'ọdịnihu, anyị na-akwado na ị na-echekwa ngwọta dịka ọkpụkpụ dị na vials na -X7UMXC. N'ozuzu, a ga-enwe ike iji ruo izu abụọ. Tupu ojiji, tupu i mepee vial anyị na-akwado na ị ga-ekwe ka ngwaahịa gị mee ka ị dịkwuo ọkụ ma ọ dịkarịa ala oge 20.
Nkwakọ ngwaahịa nke ngwaahịa nwere ike gbanwee ihu n'oge njem, na-eme ka ogige anụ ahụ na-agbanye n'olu ma ọ bụ okpu nke vial ahụ. kpoo vial ahụ site na nkwakọ ngwaahịa ya ma jiri nwayọọ na-egwu ka ogige ahụ daa na ala nke vial ahụ. maka ngwaahịa mmiri, na-emepụta ihe na 200-500 RPM iji kpokọta mmiri mmiri na ala nke vial ahụ. gbalịa izere ọnwụ ma ọ bụ nsogbu n'oge ejizi.
Na Vitro na na Vivo Ngosipụta nke ntụ ọka Alcaloid Nuciferine
Ihe lotus dị nsọ (Nelumbo nucifera) nwere ọtụtụ phytochemicals ma nwee akụkọ ihe mere eme nke mmadụ. Iji chọpụta ebe ogige nwere ike ibu ọrụ maka mmetụta uche psychotropic, anyị jiri amụma amụma silico nke ụdị phytochemicals mara. Ntuciferine raw ntụ ntụ, ihe ngwugwu alkaloid nke Nelumbo nucifera na Nymphaea caerulea, nwere profaịlụ yiri ahịrị yiri ogige antipsychotic. Ihe omumu anyi bu ihe nchopine kpochapu na vitro na ihe ndi ozo.
A na-ebu ụzọ chọpụta nchịcịnine raw ntụ ntụ na silico site na iji nha nhata na njikọta, na-esote site na iji usoro Psychoactive Drug Screening nke National Institute of Health Consensus. A na-enyocha ntụ ntụ nchịcịnine na vivo na nzaghachi nke isi, nkwụsị nke mbido, ọrụ hyperlocomotor, na nchịkọta ọgwụ ọjọọ.
Ntuciferine ntụ ntụ na-emepụta profaịlụ profaịlụ yiri ọgwụ aripiprazole-dị ka ọgwụ na-egbu egbu. Nneciferine raw ntụ ntụ bụ onye na-agbagha na 5-HT2A, 5-HT2C, na 5-HT2B, agonist na-agbanwe agbanwe na 5-HT7, agonist anya na D2, D5 na 5-HT6, agonist na 5-HT1A na ndị nabatara D4, ma gbochie transporter dopamine. Ngwá ụfụ nwere ike iji mee ihe na-eme ka ọ ghara ịṅụ ọgwụ ọjọọ, nchịkwa Nuciferine kpuchiri isi-nzaghachị ntụgharị na mmetụta mkpali nke onye agonist 5-HT2A, gbanwere ihe mkpali na-egosi discriminative clozapine, amphetamine mepere emepe arụ ọrụ locomotor, na-egbochi ọrụ nke locomotor na phencyclidine (PCP) weputara PCP na-eme ka ihe mgbochi nke mbempe akwụkwọ na-enweghị ihe ọ bụla na-enweghị ntinye nke catalepsy.
Nkọwa ihe omimi nke Nuciferine raw ntụ ntụ bụ nke yiri ma ọ bụghị nke yiri nke ahụ nwere ọtụtụ ọgwụ ndị na-egosi na ntụpọ Nuciferine nwere ihe ndị na-emechi emechi.
Powder Powder Nuciferine (CAS 475-83-2)
Raw Nuciferine ntụ ntụ Marketing
Esi zụta Nukukuline ntụ ntụ (CAS 475-83-2) site na AASraw suppliers
PolypodiuM wepụ ntụ